Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Intenutated China Manufacturer
Ukugonywa kweeMveliso Iinkonzo eziNyango,Inyolo ephezulu yeMithi,Ukugonywa kweMpilo yeMpilo
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Ukugonywa kweeMveliso Iinkonzo eziNyango,Inyolo ephezulu yeMithi,Ukugonywa kweMpilo yeMpilo
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Intenutated
Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Intenutated
 Inkukhu yokukhusela i-Pox Live Intenutated
Abasebenzi ababini benza izivulo kwiiqanda ezinkukhu ukulungiselela ukuveliswa kwegciwane lokugonya.
Imveliso yokugonya inezigaba eziliqela. Okokuqala, i-antigen ngokwayo iveliswa. Iintsholongwane zinyuka kwiinkonzo eziphambili ezinjengamaqanda enkukhu (umz., Ngenxa yentsholongwane) okanye kwimigca yesigxina eqhubekayo njengamaseli esintu ekhulile (umz., Ngenxa ye- hepatitis A ).  Iibhaktheriya zinyuka kwiindawo eziphathekayo (umzekelo, uhlobo lweHaemophilus influenzae b). Ngokufanayo, iprotheni ephindaphindiweyo evela kwii-virus okanye ibhaktheriya inokuveliswa kwimvubelo, iibhaktheriya, okanye iinkcubeko zeseli. Emva kokuba i-antigen ishicilelwe, ikwahlukana kwiiseli ezisetyenziselwa ukuyivelisa. Intsholongwane ingadinga ukucinywa, mhlawumbi kungabikho ukuhlanjululwa okufunekayo. Iiprotheni ezifunekayo zifuna imisebenzi emininzi ebandakanya i-ultrafiltration kunye ne-column chromatography. Ekugqibeleni, isitofu sokugonywa senziwe ngokongeza i-adjuvant, stabilizers, kunye nezilondolozo njengoko kuyimfuneko. I-adjuvant iphakamisa iimpendulo zokuzivikela ngamajoni omzimba we-antigen, i-stabilizers yandisa ubomi bokugcina, kunye nezilondolozo zivumela ukusetyenziswa kwamanzi amaninzi.   Iigonya zokudibanisa ziyanzima ukuphuhlisa nokuvelisa, ngenxa yokungahambelani kwamathuba kunye nokusebenzisana phakathi kwama-antigens kunye nezinye izithako ezibandakanyekayo. 
Related Products List: Ukugonywa kweeMveliso Iinkonzo eziNyango , Inyolo ephezulu yeMithi , Ukugonywa kweMpilo yeMpilo , Ukugonywa kweeMveliso eziCwangcisiweyo , Ukugonywa kweeMveliso zeMpilo , Ukugonywa kweeMveliso eziKhuselekileyo eziKhuselekileyo , Ukugonywa kwe-Bioproducts Iimveliso ezizimeleyo , Ukugonywa kwezeMpilo